फेब्रुअरी बर्थस्टोन - नीलम - बैजनी रंग - नयाँ अपडेट २०२१
नीलम फेब बर्थस्टोन र color्गको पुरानो र आधुनिक दुबै सूचिहरूमा फेब्रुअरीको लागि बर्थस्टोन हो।
फेब्रुअरी बर्थस्टोनको अर्थ के हो?
एक जन्मस्टोन एक रत्न हो जुन फेब्रुअरीको जन्म महिनासँग सम्बन्धित छ: नीलम। यसले सम्बन्धहरूलाई सुदृढ पार्छ र यसले कम्ति साहस दिन्छ। एक समय, केवल रोयल्टीले रत्न लगाउन सक्थ्यो। पुरातन ग्रीकहरूले यो सोचे नीलम नशाबाट जोगिएको।
फेबको बर्थस्टोन, नीलम , क्वार्ट्जको वायोलेट विविधता हो। नीलम सेमिप्रेशियस ढु stone्गा हो जुन प्राय: गहनाहरूमा प्रयोग गरिन्छ र फेब्रुअरी बर्थस्टोनको लागि परम्परागत हो।
फेब्रुअरीको बर्थस्टोन रंग के हो?
फेब्रुअरी बर्थस्टोन कहाँ पाइन्छ?
फेब्रुअरी बर्थस्टोन गहना के हो?
फेब्रुअरी बर्थस्टोन कहाँ पाउन सकिन्छ?
फेब्रुअरी बर्थस्टोनको राशि चिन्हहरू के हुन्?
नीलम एक हल्का गुलाबी बैजनी र from्गबाट ​​गहिराइमा प्राथमिक रues्गहरूमा देखा पर्छ बैजनी रंग यसले एक वा दुबै माध्यमिक रuesहरू, रातो र निलो प्रदर्शन गर्न सक्छ। आदर्श ग्रेडको एक प्राथमिक छ बैजनी १–-२०% निलो र रातो माध्यमिक रंगको साथ ––-–०% को ह्यू।
को मूल जम्मा नीलम ब्राजिलमा प्रशस्त मात्रामा छ जहाँ यो ज्वालामुखी चट्टानहरू बीच ठूला जीओडहरूमा हुन्छ। अर्टिगास, उरुग्वे र छिमेकी ब्राजिल राज्य रियो ग्रान्डे डो सुल ठूला विश्व उत्पादकहरू हुन्। यो दक्षिण कोरियामा पनि फेला पर्दछ र खानी गरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो ओपनकास्ट नीलम विश्वमा शिरा म्यासौ, तल्लो अस्ट्रियामा छ। धेरै ठीक छ नीलम रसियाबाट आएको हो, विशेष गरी एकटेरिनबर्ग जिल्लाको मुरसिन्का नजिकैबाट, जहाँ यो ग्रानिटिक चट्टानहरूमा ड्रससी गुफाहरूमा देखा पर्दछ। दक्षिण भारतमा धेरै इलाकामा उत्पादन हुन्छ नीलम। सबैभन्दा ठूलो ग्लोबल मध्ये एक नीलम उत्पादकहरू दक्षिण अफ्रिकाको जाम्बिया हो र यसको वार्षिक उत्पादन लगभग १००० टन छ। नीलम कम्बोडिया सहित विश्वका अन्य धेरै स्थानहरूमा देखा पर्दछ।
हामी नीलम अंगूठी, कंगन, झुम्का, हार र अन्य धेरै बेच्दछौं।
नीलम रत्न गहना एक आकर्षक र आकर्षक बैजनी रंग चम्किन्छ र फेब्रुअरी बर्थस्टोन पनि हो।
त्यहाँ राम्रो छ हाम्रो पसलमा बिक्रीको लागि नीलम
फेब्रुअरी नीलम भनिन्छ भावनाहरु, भावनाहरु र मानहरु को पहिरन को लागी स्पष्टता ल्याउन को लागी। नीलम तपाइँको दिमाग र तपाइँको मुकुट चक्रमा शान्ति ल्याउन कार्य गर्दछ ताकि तपाइँ कुनै पनि अवरोधहरू निको पार्ने कुरामा केन्द्रित हुन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई आनन्दको अनुभवबाट पछि रोक्दछ। तपाईंको सातौं चक्र बैजनी हो र यो मुकुट चक्रको रूपमा परिचित छ किनकि यो तपाईंको टाउकोको एकदम माथि छ।
कुम्भ र मीन पत्थर दुबै फेब बर्थस्टोन हुन्
जुनसुकै पनि तपाईं कुंभ वा मीन हुनुहुन्छ। नीलम फेब्रुअरी १ ​​देखि २ from को ढु the्गा हो।
फेब्रुअरी 1 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी2कुंभ नीलम
फेब्रुअरी3कुंभ नीलम
फेब्रुअरी4कुंभ नीलम
फेब्रुअरी5कुंभ नीलम
फेब्रुअरी6कुंभ नीलम
फेब्रुअरी7कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 8 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी9कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 10 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 11 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 12 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 13 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 14 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 15 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 16 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 17 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 18 कुंभ नीलम
फेब्रुअरी 19 मीन नीलम
फेब्रुअरी 20 मीन नीलम
फेब्रुअरी 21 मीन नीलम
फेब्रुअरी 22 मीन नीलम
फेब्रुअरी 23 मीन नीलम
फेब्रुअरी 24 मीन नीलम
फेब्रुअरी 25 मीन नीलम
फेब्रुअरी 26 मीन नीलम
फेब्रुअरी 27 मीन नीलम
फेब्रुअरी 28 मीन नीलम
फेब्रुअरी 29 मीन नीलम
हाम्रो रत्नको पसलमा बिक्रीको लागि प्राकृतिक फेब्रुअरी बर्थस्टोन
सगाई रिंगहरू, नेकलेसहरू, स्टड इयररिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, पेंडन्टहरू ... को रूपमा हामी अनुकूलित फेब्रुअरी बर्थस्टोन गहना बनाउँदछौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।
नीलम 1.96 CT
नीलम 4.01 CT
नीलम 4.64 CT
नीलम 4.85 CT
नीलम 5.64 CT
नीलम 6.14 CT
नीलम 6.78 CT
नीलम 6.90 CT